Wiricheya: Yepamberi-Inemidziyo Yekurapa Midziyo Inoregedza Budgetary Mitoro
Kubva pakati pemakore ekuma2000 kuchipatara mashandiro ari kuramba achidzikira. Nekuda kweizvozvo bhajeti ravo raifanira kuve rakachengetedza mari. Iwo madhipatimendi emari ezvipatara ane basa rakaoma rekudzikisa mutengo pasina kukanganisa kurapwa kwevarwere uye mabasa.
Pakave nemitemo yakawanda yekuchengetedza mari inoshandiswa muzvipatara munyika yose munguva pfupi yapfuura. Nhau dzakaipa ndedzekuti kana mabhajeti asingakwanise kuve akaenzana kazhinji vashandi vanochekwa, kana iri nguva yekupedzisira sarudzo kana zvese zvimwe zvikatadza.
Kugadzirisazve Zvinhu kuMitengo Yekucheka
Imwe nzira yekudzikisa mitengo inoshandiswa nemasangano mazhinji ndeyekugadzirisazve kana kucheka akati wandei madiki maitiro kana kutenga zvinhu zvichipesana nechinhu chikuru chimwe. Mumwe muenzaniso ndipo apo chipatara chakasarudza kushandisa matauro anoshandiswazve iwo avanowachisa panzvimbo yacho kusiyana nekutenga matauro anoraswa.
Dzimwe nzira dzekucheka mutengo dzinosanganisira kushandisa zvigadzirwa zvakajairika zvezvinhu zvakasiyana senge zvekuvhiya, kudzokorodza uye kuburitsa kunze mamwe masevhisi uye mashandiro akaita seIT.
Pre-Varidzi Midziyo ndiyo Sarudzo yeMamwe Makambani
Kunyangwe nezviyero izvi, zvipatara uye zvimwe zvekurapa zvinoda michina yakakodzera kuti iite mabasa avo akakosha. Ichi chishandiso chinofanirwa kugutsa zvakanakisa zvinodiwa maererano nehutsanana, kushanda uye kuve wakagadzirira kushanda pazvinodiwa.
Kufananidza michina, yekuongorora michina, yekumisira mapombi, pamwe nesarudzo hombe - kusanganisira huwandu hwekuchengetedza hupenyu, michina yekuponesa hupenyu zviri pachena zvakakosha kumabasa echero nzvimbo yekurapa.
Izvo hazvishandi kune zvipatara kuti utenge zvigadzirwa zvitsva munzvimbo yazvino bhajeti. Nekuda kweizvozvo zvivakwa zvekurapa kubva kuvakuru kusvika kune vadiki vakasarudza kutenga pre-mishonga yekurapa kuchengetedza mari. Ivo vanogona kusevha 20-80% kana vachitenga zvakagadziridzwa kana pre-zvine zvombo zvekurapa maringe nemidziyo mitsva.
Kuvhima a hwiricheya Mutengesi kana Mutengesi Asati Watenga
Nekuti zvigadzirwa zvekurapa zvakavimbika zvakakosha mukuchengetedza hutano, kana nzvimbo yacho yasarudza kutenga zvishandiso zvakashandiswa, mutengesi anofanirwa kunyatsoongororwa. Vanachiremba vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti mutengesi anovimbika, akavimbika uye kuti michina yavanopa yakavimbiswa. Zvese zvishandiso uye zvikamu zvavanotengesa zvinofanirwa kuvewo zvakaverengerwa OEM.
Iwo makambani ekurapa ekushandisa ekurapa ayo ane mukurumbira mukurumbira anongotengesa michina yakashandiswa kubva kune vagadziri vakagadzwa saAlaris (Medsystem III), Abbott, Sigma, Baxter, Smiths Medical, Curlin uye Hospira nezvimwe.
Ivo vanozivikanwawo nekunakidzwa kwevatengi kuchengetedzwa pamwe nepo kana kunze kwesevhisi saiti uye kugadzirisa. Vanoverengeka vevatengesi ava vanoitawo zvavo zvikamu zvisiri zveOEM (Chekutanga Zvigadzirwa Zvekugadzira).
Zvivakwa zvidiki zvehutano semakiriniki uye zvakavanzika maitiro zvakare zvinobatsira kubva pakuwanikwa kwemidziyo yakadzikiswa yakagadziridzwa.